ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများ Hide, Files & ဗီဒီယိုများ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » PRIVARY Vault: ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများ, Files & ဗီဒီယိုများ Hide
PRIVARY Vault APK ကို: ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများ, Files & ဗီဒီယိုများ Hide
သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဖိုင်များ, ဓာတ်ပုံများ + ဗီဒီယိုများကာကွယ်ပါမဟုတ်တဲ့နှိုင်းယှဉ် - - ဖိုင်များ, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက် encrypted ပုဂ္ဂလိက Vault Privary အင်အားကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံများ, စာရွက်စာတမ်းများ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်တွေကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယများအားလုံး Hide ။ သူတို့ကိုအမှန်တကယ်မမြင်ရတဲ့နှင့်သင့် Privary Vault မှ cybercrime.Uploaded ဖိုင်တွေဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည် Make အခြားသူများမမြင်ရတဲ့နှင့်စစ်ရေးတန်း AES CTR နည်း encryption ကိုစွမ်းအားဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်သို့မဟုတ်လက်ဗွေရာဖြင့်ကာကွယ်ထားရလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Privary AES Vault နှင့်အတူဓာတ်ပုံ Locker, ပြခန်း, ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်ဖိုင် Locker ဖြစ်ပါတယ် encrypted စစ်မှန်တဲ့ AES 256-bit နဲ့စာဝှက်စနစ်
ဘဏ်များလုံလုံခြုံခြုံဖောက်သည် data တွေကိုသိမ်းထားဖို့အတူတူ encryption ကိုအသုံးပြုပါ။
• Easy-To-အသုံးပြုမှုစကားဝှက် pin ကို pad ပါသို့မဟုတ်လက်ဗွေ access ကို
•အလွယ်တကူလုံခြုံမှုအရှိဆုံး Privary ပုဂ္ဂလိကဖိုင်မန်နေဂျာအတွက်န့်အသတ်ဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်နှင့် encrypt လုပ်
• Privary သင့်ရဲ့လတ်တလောအသုံးပြု apps များစာရင်းတွင်မမြင်နိုင်ဖြစ်ပါသည်
•န့်အသတ်ဖိုလ်ဒါနဲ့ subfolders Create
Privary လုံးဝ launcher ကနေ်၏နိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဖိအားသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိက Privary Vault ဖွင့်လှစ်သည့်အခါတစ်ဦး FakeSafe ဖွင့်လှစ်။
ပိုများသော features တွေ:
●သင့်ပုဂ္ဂလိက Google Drive ကို™တိမ်တိုက်ထဲမှာ encrypt လုပ်ထားရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကို Create
●လွှတ်တင်ခြင်းန့်အသတ်ဖိုင်များ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ
●အလွယ်တကူ drag'n'drop နှင့်အတူ sort
● Privary ဓာတ်ပုံကို Vault မမြင်ရတဲ့ Make
●န့်အသတ်အယ်လ်ဘမ် Create နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖုံးကိုရှေးခယျြ
Privary ဖိုင် + ဓာတ်ပုံကိုအံဆွဲဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိက Vault မဟုတ်ပါဘူး။ Privary သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဖိုင်နှင့်ဓာတ်ပုံ Vault အတွက်ဖိုင်များ, ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို encrypt လုပ်ရန်သင့်ပုဂ္ဂလိကဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
Q: Privary ဝှက်ဖိုင်များကိုသနည်း
ဖြေ Uploaded ဖိုင်တွေအများပြည်သူပြခန်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးစစ်မှန်တဲ့ AES နဲ့ encrypt နေကြသည်။
ဖြေအမှတ် Privary သင်သည်လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုများအတွက်အခြားသူများသူတို့ကိုအမှန်တကယ်မမြင်နိုင်စေရန်ဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုနေရာချလို့ရပါတယ်ဘယ်မှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြခန်း & ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
မေး: ဒီပုဂ္ဂလိကရုပ်ပုံ Vault ထဲကဓါတ်ပုံတွေကိုသို့မဟုတျဗီဒီယိုကိုယူနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, သင်လုပ်နိုင်သည်။
A: ဟုတ်ကဲ့။ သငျသညျအသီးအသီးဖိုင်, ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအား unhide နှငျ့သငျလိုခငျြအခါတိုင်းကို default ပြခန်းမှပြန်ထည့်နိုင်သည်။
မေး: ကိုယ့် password ကိုမေ့လျော့နေလျှင်ကိုယ့်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
တစ်ဦးက: အ Privary setting တွင်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ Activate ။
မေး: Privary ထောက်ခံမှု .wmv သို့မဟုတ် .avi ပြန်ဖွင့်သလော
A: ဟုတ်ကဲ့။ Privary အားလုံးဖိုင်အမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်!
မေး: ဗီဒီယိုကို formats ထောက်ခံနေကြသည်ဘယ်?
တစ်ဦးက: အားလုံးဖိုင်အမျိုးအစားများထောက်ခံကြသည်! mp4 လျှင်, WMV, MKV, AVI, MOV, 3gp, စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်, flv, h264, DivX, ogv, f4v, m4v သို့မဟုတ် DV အရေးမထားဘူး။
မေး: ဈဘယ်နှစ်ယောက်ဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်နိုင်သလဲ
တစ်ဦးကမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျန့်အသတ်ဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Instagram ကိုသို့မဟုတ် Facebook ကနေတောင်မှဓာတ်ပုံများ။ သငျသညျ Snapchat, Whatsapp သို့မဟုတ်ကြေးနန်းများအတွက်ဓာတ်ပုံကိုချွေတာဘို့ကိုကြည့်ပါလျှင် Privary ကိုလည်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေအမှတ် Privary အလွန်လုံခြုံ AES CTR နည်းစာဝှက်ထားတဲ့ဖိုင် + ဓာတ်ပုံကို & ဗီဒီယိုကို Vault ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပြခန်း Vault ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ကိုနှငျ့အတူရှိ၏။
မေး: Privary ဆာဗာများငါ့ဖိုင်တွေပေးပို့ပါသလား?
ဖြေမရှိပါ! အားလုံးဖိုင်များကိုသာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ အာဏာအရှိဆုံး AES အားဖြင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့။ activated မိုဃ်းတိမ်ကိုသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက Google Drive ကို™နှင့်အတူသင်၏ဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါလိမ့်မယ်။ AES နှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာ encrypted ။
ဖြေ Privary ပရီမီယံ Edition ကိုကြော်ငြာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Privary ဖိုင်တွေ + ဓာတ်ပုံကို + ဗွီဒီယိုကို Vault အကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများကို? support@privary.me မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိ
Network မှ: လိုင်စင်စစ်ဆေးမှုများ & မိုဃ်းတိမ်သည်ထပ်တူပြုခြင်း (activated လျှင်)
ဖုန်းခေါ်: ပွင့်လင်း Privary သည့်အခါ InvisibleMode အတွက် (optional)
ဆက်သွယ်ရန်: သင်၏ပုဂ္ဂလိက Google Drive ကိုအကောင့် (optional) ကိုရယူသုံးရန်
✓ Privary သီးသန့်လုံခြုံရေး
ကျနော်တို့ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှအကြီးမြတ်ဆုံးအရေးပါမှုထားကြ၏။ အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိုင်တွေတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ မိုဃ်းတိမ်ကို backup လုပ်ထားတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်လျှင်, encrypted data တွေကိုဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင် Google Drive ကို™သာအတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ပြည်နယ်.
Privary ဖိုင်တွေ + ဓာတ်ပုံကို + ဗွီဒီယိုကို Vault အမြင့်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်မဆိုပုဂ္ဂလိကဒေတာစုဆောင်းမထားဘူး။ fourchars.com/en/privary-privacy/ မှာဆက်ဖတ်ရန်
ဒီ Privary update ကိုအသစ်အမှတ်တံဆိပ်:
တစ်ထစ်တွေနဲ့ device များအတွက်· Adjustments
Privary ၏အတွင်းပိုင်းကနေဓါတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများစေရန်·နယူးခွင့်ပြုချက် "ကင်မရာ"
တစ်ဦးထက်ပိုလုံခြုံအတွေ့အကြုံအတွက်တယ်လီဖုန်းခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် InvisibleMode အစားထိုး။
အဆိုပါ Privary app ကို-သင်္ကေတဖယ်ရှားပစ်ရန်ယခု DisguiseMode ကိုသုံးပါ။
PRIVARY Vault: ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများ, Files & ဗီဒီယိုများ Hide